Kusukela kwesokunxele: UNks Tanita Permaul, uNks Amy Rouillard noMnu Brandon Willnecker babambe iqhaza emqhudelwaneni i-2021 PLANCKS online hackathon.
Abafundi BeMastazi Bangenele Umqhudelwano Waphesheya WeFiziksi
Abafundi abenza izifundo zeMastazi eSikoleni seKhemistri neFiziksi ngesingisi i-School of Chemistry and Physics (e-SCP) uNks Tanita Permaul, uNks Amy Rouillard noMnu Brandon Willnecker kade bengenele i-2021 PLANCKS online hackathon, lapho beqhudelane khona namaqembu amazwe angama-50 ukuphendula imibuzo enzima yefiziksi.
Laba abathathu akade bezibiza ngama-Springblochs, isiteketiso esisuselwe enyamazaneni yaseNingizimu Afrika nama-“Bloch spheres” uphawu olumele ikhyubhithi, yibona kuphela abakade bemele iNingizimu Afrika.
I-Physics League Across Numerous Countries for Kick-ass Students (i-PLANCKS) ihlelwa yi-International Association of Physics Students (i-IAPS) kanti iba khona minyaka yonke, ezweni elisha njalo ngonyaka. Okokuqala ngqa selokhu yasungulwa ngonyaka wezi-2014, ibanjelwe enkundleni yokuxhumana ngobuchwepheshe selokhu kubheduke ubhubhane i-COVID-19.
Lamathimba angama-50 abafundi ngantathu noma ngabe abenza iziqu zokuqala noma zeMastazi, bebese-Physics, Engineering Physics and Astronomy Society yase-University of Porto, e-Portugal, baphendule imibuzo yencwadi yefiziksi ethinta izihloko eziningi okukhona i-quantum mechanics, i-fluid mechanics, isimo sefiziksi, ne-astrofiziksi, ebiyenzelwe ukuxukuza ugebhezi nokuchithisa isizungu abaqhudelanayo nezethameli ezingaphezu kwekhulu.
‘Nakuba bekusenkundleni yokuxhumana, abemaningi amathuba okuncokola nabanye abantu “ngesikhathi sekhofi enkundleni” nangesikhathi sokuphicana,’ kusho u-Rouillard. ‘Ikhonsathi elimnandi lasebusuku lenze ukuthi abaqhudelanayo bazitike ngomculo wamaqembu abafundi base-University of Porto.’
Lelithimba lithe amanye amazwibela omqhudelwano yithuba lokuzwa izikhulumi ezivelele zikhuluma ngezihloko ezehlukene, phakathi kwazo obekukhona uSolwazi Elvira Fortunato ekhuluma nge-elekthroniksi, uSolwazi Petra Rudolf ekhuluma ngama-molecular motor noSolwazi Jocelyn Bell Burnell ekhuluma ngomsebenzi wakhe wama-pulsar.
Ngemva kokuqeda umqhudelwano wamahora angama-36, ama-Springblochs aphume endaweni yama-29.
‘Njengabantu abakade beqala ukungenela umqhudelwano, sijabule kakhulu ngomphumela wethu,’ kusho wona.
‘Ukuthi ithimba laseNingizimu Afrika liqede endaweni ephakathi yimpumelelo enkulu,’ kusho uSolwazi Thomas Konrad wase-SCP. ‘Kukhombisa ukuthi abafundi befiziksi base-UKZN bayakwazi ukuqhudelana nabanye ezingeni lomhlaba.’
Amathimba amathathu aphume phambili yi‘The Fences’ yase-United Kingdom, ‘i-Oachkatzlschwoaf’ yaseJalimane ne‘Dark Fermi Gang’ yase-United Kingdom, kwathi imiklomelo yemali enikwe lamathimba yaba ngebalwa njenge-Planck, okuyinto ama-Springbloch athe ibihambisana nomoya womqhudelwano.
Abahleli bakhiphe nemiklomelo yezimpendulo ezihlekisayo zeminye imibuzo enjengokuthi ‘The Almighty told us’ nowodwa obunophawu lobuso oludangele.
U-Permaul no-Rouillard benza ucwaningo lweMastazi ngaphansi kweso lika Konrad nge-Quantum Information Group yase-SCP kanti omunye ucwaninga i-quantum teleportation kuthi omunye i-quantum control. U-Willnecker, owelulekwa nguDkt Mervlyn Moodley yena ubheka izindlela zokubala kwifiziksi yezinto eziningi.
I-SARChI Chair Iseqhulwini Lokuvikela Upholi Onqabile WaseNingizimu Afrika
I-UKZN Ibe ne-Open Day Okokuqala Kwingosi Yokuxhumana Ngobuchwepheshe
INyuvesi Iyalila Ngokudlula Kwengqalabutho KweZamanzi